Wararka Somalia | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia
Ra’isalwasaaraha Dalka Itoobiya Abiye Axmed ayaa booqasho labo cisho ah oo uu ku tagay Sucuudiga waxaa ugu suuragashay in xabsiyada dalka Sucuudiga uu ka sii daayo 1,000 Qof oo Itoobiyaan ah. Isaga oo ka hadlayay Garoonka diyaaradaha Adis ababa ayuu Abiye Axmed sheegay in Diyaaradda ay la saaranyihiin 690 Qof oo ka mid ahaa Maxaabiista u dhalatay Itoobiya oo ku xirnaa ...
Kulan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirrada Maamulka Somaliland islamarkaana uu shir guddoominayay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa looga hadlay colaadda Tukarraq iyo eedeeyn ay shalay Puntland u jeedisay Maamulka Somaliland. Kulanka oo ka dhacay Madaxtooyada Somaliland waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah Wasiirrada Maamulka Somailand,madaxweynayaashii hore ee Somaliland soo maray qaarkood iyo xubno kale. ...
Saraakiisha ammaanka Magaalada Baydhabo, ayaa sheegay iyadoo laga duulaayo suggida ammaanka Magaaladaasi in ciidamada la faray wax gaadiid waaweyn ah xilliga habeenkii ah inaysan soo gali karin Magaalada Baydhabo. Saraakiisha ammaanka Magaalada ayaa sababta ku sheegay ujeedka inuu yahay suggida ammaanka iyo dadka reer Baydhabo inaysan wax dhibaato ah la kulmin. Waxa ay sheegeen Saraakiisha ammaanka Magaalada Baydhabo gaadiidka inaysan ...
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa billaabay tababar dheeraad ah oo la siinayo Ciidanka AMISOM kaas oo la xiriira ka hortagga Qaraxyada Miinooyinka ah ee dhulka la geliyo. Ciidamada Kenya ee jooga Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa ka mid ah kuwa lagu billaabay tababarka ka hortagga Qaraxyada Miinooyinka ah. Tan iyo 13kii January 2018,Ciidanka Kenya kaliya waxaa ay la kulmeen ...
Magaalada Muqdisho waxaa xalay fiidkii ka billowday Roob xoog leh,kaas oo inta badan xalay ilaa saaka da’ayay,waxaana uu saameeyay nolosha dad badan. Meelaha qaar waxaa la sheegayaa in Guryo ay dumeen oo uu khasaare ka dhashay halka Meelo kale oo ay ka midyihiin xeryaha Barakacayaasha laga barakacay. Qaarka mid ah Xeryaha Barakacayaasha ah ayaa la sheegayaa in laga barakacay iyada ...
Tareen Shidaal waday oo ku rogmaday Mombasa,Sawirro
Tareen Shidaal waday ayaa ku rogmaday magaalada Mombasa ee dalka Kenya iyada oo qeyb ka mid ah shidaalka saarnaa Tareenka uu daatay. Warbixin ay soo saareen Booliska Kenya ayey ku sheegeen in Tareenka uu waday shidaalka loo yaqaan super petrol, xilliga rogmashada,waxaana uu waday 250,000 oo Litir. Boolisku waxaa ay sheegeen in 7 ka mid ah furarka Tareenka ay Badda kku dhaceen,waxaana ...
Imitixaankii W.Waxbarashada oo maanta baaqday
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in maanta uu baaqday Imtixaanka shahaadiga ah ee Dowladda Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya C/Raxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in Roobka xoogga leh ee xalay ilaa saaka ka da’aya Muqdisho uu sababay in aanay ardayda u suurto gelin in ay tagaan goobaha lagu qaadayay Imtixaanka. Wasaaradda Waxbarashada ayaa shalay furtay Imtixaanka shahaadiga ah,waxaana u ...
Xildhibaan Xiddig: “Guddoonka waa in uu la xisaabtamo xildhibaannada maqan”
Xildhibaan C/Rashiid Maxamed Xiddig oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa Guddoonka Golaha shacabka ku canaantay sida aanay ula xisaabtamin XIldhibaannada ku jira Golaha ee aan xaadirin kulanka Golaha shacabka. Xiddig ayaa sheegay in XIldhibaanno yar oo uu isaga ka mid yahay ay xilli hore xaadiraan kulanka Golaha shacabka halka kuwo kalena uu sheegay in aysan imaan fadhiga Golaha ...
Xasan Sheekh oo baaq u diray maamullada Somaliland iyo Puntland
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq nabadeed u ddiray maamullada Somaliland iyo Puntland ee ay Ciidamadooda ku dagaallameen degaanka Tukarraq ee Gobolka Sool. Xasan Sheekh ayaa sheegay in dagaalka labada maamul u dhaxeeya uusan wax faa’ido ah u lahayn labada dhinaca,waxaana uu ku baaqay in ay wadahadal ku beddelaan. Waxaa uu Dalka Tanzania uga qeybgalay shirka Madaxweynayaashii ...
Qaramada midoobey oo ka warbixisay khasaaraha ka dhashay Roobka Duufaanta watay
Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan isku dubarridka arrimaha bani’adamnimada ee UNOCHA ayaa sheegtay in khasaare xoog leh uu geystay Roob dabeylo watay oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka da’ayay Waqooyiga iyo bariga Soomaaliya. UNOCHA waxaa ay sheegtay in 35 Guri ay baaba’een sidoo kalena ay in ka badan 2,000 oo neef ku Bakhtiyeed duufaanta iyo Roobka ku dhuftay ...